पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भारत यात्रा बिहे खाने निहुमा राजनीतिक दाउ
Former King Gyanendra. Photo courtesy: Royal source
काठमाण्डौ, 25 Feb, 09- पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नागरिक जीवन जिउन थालेपछि पहिलो पटक देश बाहिर जाने भएका छन् ।
बुधबार अपरान्ह भारतीय जेट एयरको उडानमार्फत् पूर्व राजा एकजना भारतीय नातेदारको विहेमा त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । विहीबार साँझ आठ बजे भोपालको पुल साइड लनास्थित जेहन्नु पाटी प्यालेसमा उदीपप्रताप देव तथा पद्मा मन्‍जरी देवीकी छोरी महाराजकुमारी पताजेमा मुनि श्रीमन्‍जरीदेवीको विवाह भँवर अनन्त विजय िसंहसित हुन लागेको विवाहमा पूर्व राजा सरिक हुनेछन् ।
शाही शासनकालमा भारत जान लागेका तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री पिबी नरिसंह रावको निधन भएपछि विमानस्थल पुगेर फर्केका थिए । त्यसपछिपनि उनी भारत जान चाहे तर भारतले उनलाई निम्तो पठाएन । बैबाहिक कार्यक्रममा उनी भारत जान लागेको देखिएपनि यसमा राजनीतिक उद्देश्यपनि देखिएको छ । उनको साथमा पूर्वरानी कोमल, निजी सचिव डा. फणिराज पाठक र एडिसी महेश शाह ज्ञानेन्द्रसँग भारत जाने बताइएको छ ।
भारतमा रहँदा उनले सत्तारुढ गठबन्धनकी प्रमुख तथा कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी, प्रधानमन्त्री मनमोहन िसंह, विपक्षी दलका नेता लालकृष्ण आडवाणी र भाजपा अध्यक्ष राजनाथ िसंहसहितका नेताहरुले भेट्ने योजना बनाएको श्रोतले बताएको छ । भारतका विभिन्न साधु-सन्त र हिन्दुवादी संगठनका नेतासँग पनि उनले भेट्नेछन् । बाहिरबाट हेर्दा सामान्य मानिएको उनको भ्रमण अन्ततः लोकतन्त्रकालागि हानिकारक सावितपनि हुन सक्छ । भारतकै कारण गद्दी गुमेको निश्कर्षमा पुगेका उनी यतिबेला भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन प्रयासरत छन् ।
भारत जानुअघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले विभिन्न नेतासँग भेटघाट गरेको श्रोतहरुले उल्लेख गरेका छन् । भेटघाटको प्रबन्ध उनका सचिव सागर तिमििल्सना र फणिराज पाठकले मिलाइदिने गरेका छन् । खासगरी दरबारिया पृष्ठभूमि भएकार राजनीतिक नेताहरुसँगको परापर्श राजाले केही समय यता घनिभूत बनाएका थिए । दलहरुका बीचमा विवाद चुलिएका बेला संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबन्ने र त्यस्तो अवस्थामा सेनाको सहयोगमा ०४७ सालकै संविधान ब्युँताएर राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्न सकिने सल्लाह उनलाई दिने गरिएको छ ।